Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny Anadrol (Oxymetholone) ho an'ny bodybuilding
Ny fampiasana ny steroids anabolic dia manohy manao fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena amin'ny fampiasana bodybuilder ary mampiasa azy ireo ny atleta mba hijanona amin'ny tendrony ambony. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mandray ireo hery fiarovan-tena izay mampitombo sy manatsara ny hery ao amin'ny fanantenana fa hanatsara ny fahaiza-manaony izy ireo hampiakatra ny lanjany mahery kokoa, hihoatra lavitra, hihazakazaka haingana, na hitsambikina ambony. Raha mitady mitady steroide anabolic izay hanampy anao hanatratra izany rehetra izany, tokony handinika ny fividianana Anadrol (Oxymetholone) ianao.
1.Inona ny Anadrol (Oxymetholone)? Ahoana no iasany?
Anadrol (434-07-1) dia steroid am-bony izay anisan'ny tarika medikaly fantatra amin'ny hoe anabolic steroids ary io dia ny marika nomena ny Oxymetholone. Avy amin'ny Dihydrotestoterone izy io, ary heverina ho iray amin'ny steroids anabolika androgenic (AAS) mahomby indrindra amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Ity steroid ity koa dia mivarotra amn-karena toy ny Anadrol 50, izay midika fa ny dosage amin'ny 50 mg isaky ny pilina / tablette.
Oxymetholone (434-07-1) dia ny anaran'ny Anadrol ary ny anarany amin'ny anarany dia 17ß-hydroxy-2- (hydroxymethylene) -17-methyl-5a-androstan-3-iray. Ireto manaraka ireto ny toetra maha-izy azy:
Formula Molecular - C21H32O3
Teboka - 178 ° mankany 180 ° C
Active ingredient - Oxymetholone
Ireo zavatra tsy azo ampiasaina - stearate magnesium, lactose, volo, povidone
Tahaka ny steroids amin'ny anabolic anabolic hafa, Oxymetholone dia agonista ny mpanaraka ny androgen. Ny fitsaboana dia tsy fitaovana iray ho an'ny 5a-reductase ary sarin'andriampahalemana ho an'ny dehndrogenase 3a-hydroxysteroid. Noho izany antony izany, ny Oxymetholone dia mampiseho ny habetsaky ny anabolika amin'ny asa androgenic, izay 320: 45. Midika izany fa ity steroid ity dia manana fiantraikany mafy amin'ny anabolic sy ny vokatra malemy androgenic.
Ny tantaran'ny Oxymetholone dia miverina any amin'ny 1960 aloha, rehefa nisy ny fianarana 30 andro momba ny marary izay nararin'ny ratra lalan-dra. Tamin'ny fiafaran'ny vanim-potoana, dia nahazo kilao ny kilao 8 ireo marary.
Nasongadin'ny olona voalohany ny sainan'ny Oxymetholone tamin'ny taratasy 1956. Hatramin'ny 1961 rehefa nampiditra ny zava-mahadomelina tany amin'ny tsena ny fampiasana ny fitsaboana any Royaume-Uni, ny Syntex sy Imperial Chemical Industries dia teo ambanin'ny Anapolon. Tsy ela dia nahazo rivotra tamin'io zava-mahadomelina io ny mpamboly, noho ny fahaizany manampy ireo mpampiasa hahazo ny tazomoka.
Mbola teo am-piandohan'ny 1960, dia nampidirina tao amin'ny tsenan'i Etazonia sy ny faritra hafa amin'izao tontolo izao ny Oxymetholone. Nividy izany izy teo ambanin'ny marika maromaro, anisan'izany ny:
Ahoana ny fiasan'ny Anadrol? Eny, ity zava-mahadomelina ity dia mitondra zavatra maro ho an'ny latabatry ny bodybuilder. Voalohany indrindra, ny endriny mivaingana, Oxymetholone, dia mamorona hormonina amin'ny hôpônônina amin'ny testosterone. Ny vatanao dia mahatonga ny testosterone ho avy, saingy tsy afaka mifanaraka amin'ny fahombiazan'ity steroid ity amin'ny famokarana testosterone. Anadrol dia mamokatra bebe kokoa amin'ny testosterone kokoa noho ny vatanao. Rehefa avy nizaka ity steroid ity ianao, dia ho vitanao ny hahazoana tombony lehibe amin'ny tanjaka sy ny hozatra ary ny haben'ny habaka.
Manatsara ny fitehirizana azy sy ny proteinina izy io. Amin'ny fanaovana izany, dia mamorona ny tontolo tsara indrindra ho an'ny fitomboan'ny taova. Anadrol koa dia mampitombo ny filàna, izay zavatra tsara ho an'ireo manantena hahita tombony lehibe.
Ny iray amin'ireo zavatra mametraka Anadrol ankoatra ny steroids maro hafa anabolika dia ny fahafahany manatsara ny famokarana sela mena. Io fanafody io dia manatsara ny habetsaky ny hormone erythropoietin, izay tafiditra amin'ny famokarana sela mena. Izy io dia miampita ny sela ao amin'ny renirano ary manentana ny famokarana ny hormone, izay navotsotra tao amin'ny ra. Ny hormona dia mivezivezy manerana ny vatana ary miasa amin'ny sela mpitrokatry ny taolana mba hamokarana sela vaovao mena. Izany no mahatonga ny fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny tsy fahazakana.
Ny fahaiza-manaon'ny Anadrol hanatsarana ny famokarana sela mena dia manampy koa amin'ny fanatsarana ny asan'ny atleta. Rehefa mihamitombo ny isan'ny sela mena ary mihodina manodidina ny vatana, dia betsaka ny oksizenina haverina mankany amin'ny hozatra. Izany dia miteraka hery bebe kokoa mandritra ny fiatoana, izay ahafahanao manao tsara kokoa ao amin'ny gym.
Misy maro Mampiasa Oxymetholon. Voalohany indrindra, ity steroid ity dia mahomby indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny taovam-pisefoana sy ny fahazoana mavesatra, amin'ny ankapobeny amin'ny fanatsarana ny proteinina amboara. Izy io dia nomarihina ho anisan'ny steroids anabolic tsara indrindra amin'ny fampitomboana ny isan'ny sela mena ary miaro ny fifohana sigara mandritra ny fiasan-tsasatra mafy na amin'ny enta-mavesatra be. Noho ireo antony ireo, dia ampiasaina amin'ny tanjona ara-batana sy ny fampiroboroboana ataon'ireo atleta, mpanao biriky, ary ny herin'aratra.
Anadrol dia lazaina fa anisan'ny mahery indrindra sy steroids anabolic mahery sy mahery indrindra ary azo ampiasaina amin'ny fitsaboana. Ny fampiharana ara-pahasalamana voalohany amin'ny zava-mahadomelina dia ny fitsaboana ny osteoporose sy ny anemia. Ny zava-mahadomelina koa dia ampiasaina amin'ny fitiliana angioedema herintaona, syndrome ny otrikaretina VIH / SIDA, ary koa karazana homamiadana amin'ny vehivavy.
Noho ny fahaizany mampiroborobo ny fahazoana mavesatra, Anadrol koa dia ampiasaina mba hanampiana ireo marary tsy ampy sakafo hahazo lanjany aorian'ny ratra goavana, aretina mafy, na aretina maharitra. Ireo zaza tsy manam-pahataperana sy marary tsy mahazaka ny lanjany ara-dalàna noho ny antony tsy voamarina ara-pitsaboana dia afaka mandray soa avy amin'izany fitsaboana izany koa.
Oxymetholone dia anisan'ireo steroids anabolic anabolic vitsivitsy izay mijanona ho an'ny fitsaboana any Etazonia. Tahaka ny an'ny AAS hafa, ny Anadrol dia fandaharam-potoana fanaraha-maso III ao Etazonia amin'ny lalàna Act Controlled.
Anadrol dia azo atao amin'ny fomba roa: amin'ny orana sy amin'ny tsindrona. Ny takelaka Oral Oxymetholone dia atolotra ao anaty tavoahangy misy pilià voafantina 100. Rehefa mandray an'i Anadrol am-bava, dia mety tsara isan'andro Oxymetholone dosage Ny atleta lahy dia 1-5mg isaky ny kilao amin'ny lanjan'ny vatana. Ny ADN fampiasana Anadrol (Oxymetholone) dia 50 mg isan'andro. Raha afaka mandefitra izany ny vatanao, dia tsy misy olana amin'ny fampakarana ny dosie Oxymetholone tsikelikely amin'ny 100 mg isan'andro.
Tsy dia fahita firy loatra ny mpampiasa mila mampiasa mihoatra ny 100 mg of Anadrol isan'andro. Raha ny marina dia tsy ilaina ny maka mihoatra ny 100 mg isan'andro. Ny fitrandrahana dosage avoavo kokoa dia mety miteraka vokatra hafa eo amin'ny oxymetholone nefa tsy voatery mampitombo ny vokatra antenainao.
Ny mpampiasa sasany dia mihevitra fa ny vokatr'izany dia miteraka fahantrana misimisy kokoa noho ny tsy fisian'ny atiny Anadrol noho ny tsy fisian'ny atiny ary miditra mivantana amin'ny rà. Na izany aza, ity steroid ity dia medikaly c17-alpha alkylated, izay midika fa tsy levon'ny aty izany. Noho izany, ny ampahany betsaka amin'ny fitambaran'ny fikambanana dia mitantana ny rà mandriaka tahaka ny nataon'i Anadrol miparitaka. Vaovao mahafaly ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izany noho ny fahazoana mora ny mitondra fanafody Anadrol, toy ny fanoherana ny fitsaboana tsy tapaka matetika.
Noho ny natiorany mahery vaika, ny lozam-pifaneraserana mahery vaika androgenic, ary ny fiatraikan'ny fanasitranana virilization (fampandrosoana ny toetran'ny lahy), dia tsy natao hampiasaina amin'ny vehivavy i Anadrol. Noho izany dia tsy dia misy loatra ny fitsipika momba ny fitantanana ny fampiasana vehivavy amin'ny fikasana hanatsara ny vatan'olombelona sy ny fampivoarana.
Inona no mitranga raha tsy mitaiza ianao? Tokony haka ny doka Anadrol tsy nahy raha vao tsaroanao. Na izany aza, raha toa ka efa ho ny fotoana ho an'ny dose manaraka, tokony handalo ny dosa tsy ampy ianao ary hamerina ny fandaharam-potoana fitsaboana tsy tapaka. Aza mandray dingana indroa. Ny fampiasana ny Oxymetholone dia tsy maintsy miovaova mba hahatratrarana ny vokatra tadiavina.
Mazava ho azy fa mety hampidi-doza tanteraka ny fihanaky ny steroid. Toy ny steroids hafa, dia mety hampidi-doza ny fahasalamanao ny Anadrol. Ny voka-dratsin'ny Anadrol angamba dia vokatry ny fifohana sigara, ny fanafihana amin'ny fo, ary ny fikorontanan-tsaina. Matokia ihany koa fa tsy manana olana ara-pahasalamana ianao alohan'ny handraisana an'i Anadrol na amin'ny steroid hafa.
Zava-dehibe ny mitondra Oxymetholone amin'ny fepetra fisorohana mba hisorohana ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina amin'ny toe-pahasalamana. Zava-dehibe ny fanadihadiana amin'ny dokotera momba ny fampiasanao ny zava-mahadomelina mba ahazoana antoka fa azo antoka fa ampiasainao izany.
Ny toetra anabolika amin'ity steroid ity dia mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny famolavolana hamandoana sy ny hamaroan'ny hery. A typical Oxymetholone cycle dia maharitra eo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny herinandro 6, ary azo ampiasaina mandritra ny diplaoma feno. Misy fomba maro ahafahanao mampiditra an'i Anadrol ho amin'ny tsingerina.
Azonao ampiasaina izany mba hanombohana ny famokarana cycles
Azonao ampiasaina izany ho toy ny fampisehoana an-tserasera. Azonao atao koa ny mampiasa azy io amin'ny faran'ny vanim-potoanao.
Na dia tsy safidy tsara aza i Anadrol, dia azonao ampiasaina any amin'ny faran'ny famaranana ny famarotana azy satria ny fahaiza-manaony anabolika dia manampy amin'ny fisorohana ny fahaverezan'ny volavola.
Araka ny fandinihana dia tsy manome zavatra betsaka momba ny tonelina na ny fahaverezan'ny lanjany ny Anadrol, fa rehefa miongana izany, ity steroid ity dia faharoa tsy misy. Bilaogera maro no mitondra Oxymetholone mandritra ny vanin-taona ririnina, rehefa mihamaro ny fitomboan'ny ratra lalina noho ny etetika.
Rehefa tonga amin'ny fahavaratra na rehefa eo akaikin'ny fifaninanana dia ny bodybuilders amin'ny ankapobeny dia miala amin'ny zava-mahadomelina satria miteraka ny fitehirizana ny rano. Noho izany, ny drafitra dia ny hampitombo ny isan'ny hatavezina amin'ny vanim-potoana ivelan'ny fotoana, avy eo andramo ny hitazona izany haavony fanampiny izany raha te hijery ny tsara indrindra. Amin'io fotoana io dia mety hampidirina steroïde hafa toy ny trenbolone na anavar.
Anadrol dia iray amin'ireo steroids anabolic miaraka amin'ny fotoana haingana indrindra. Ny AAS mahery, ny Anadrol dia miteraka fiovana mafy sy mendri-piderana. Ny ankamaroan'ny Valin'ny Oxymetholone dia hita ao anatin'ny telo herinandro voalohany.
Ireo mpampiasa dia afaka manampy mahavelona kilaometatra isan'andro ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ireo bodybuilder izay mampiasa azy io dia mitatitra fa nahazo 30 + kilao raha kely ny enina herinandro. Ho an'ny vokatra Oxymetholone tsara indrindra, ilaina ny sakafo avo amin'ny kalôria sy proteinina amin'ny fitsaboana anabolic steroid.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny mpampiasa tsirairay dia mamaly amin'ny fomba hafa amin'ny Anadrol. Amin'ny ankapobeny, raha mbola tsy nampiasa ny steroide anabolic aloha ianao, dia manome dosie mahavariana anao ny 50 gm isan'andro Oxymetholone dosage amin'ny herinandro 3-5, ary manampy anao hampiorina ny fandeferana ny steroid. Raha vantany vao mahazo aina amin'ny dosage 50 ianao, dia azonao ampitomboana tsikelikely ny dosimiao Oxymetholone mba hikolokolo ny volanao.
Rehefa ao amin'ny gym ianao dia hanome anao ny tanjaka sy ny fiaretana i Anadrol handeha lavitra kokoa sy haingana kokoa noho ny teo aloha. Ny tanjaka fanampiny izay azonao dia hanampy anao hanana hozatra bebe kokoa ary hampitombo haingana kokoa. Ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, dia hanana vatana izay tsy dia mahafinaritra loatra fotsiny fa miasa tsara ihany koa.
Oxymetholone ny antsasaky ny fiainana dia manodidina ny ora 16. Na izany aza, ny faharetan'ny fotoana mbola mitoetra ao amin'ny vatana dia mety miovaova kely avy amin'ny mpampiasa iray hafa. Tsy voatery hiditra amin'ny fomba fitsaboana sasatra miaraka amin 'ity steroid ity ny sasantsasany mandritra ny antsasak'adiny. Ny pilina 50 tokana iray nalaina indray mandeha isan'andro (alaina maraina) dia tokony ho ampy mba hitazonana ny toeran'ny plastika ho an'ny andro iray manontolo.
Na dia izany aza, ny mpiserasera sasany dia mifidy ny hanaraka ny fizarana dot ny dot, izay handraisana ny doka amin'ny maraina ary ny iray dia manao alohan'ny hatory. Ny famafazana ny dosie Anadrol amin'ny roa dia tsy mahatonga ny olana, ary tsy hisy vokany tsara izany. Amin'ny ankapobeny, ny steroid dia hita mibaribary mandritra ny herinandro 8.
7.Anadrol (Oxymetholone) tombontsoa
Misy maromaro Oxymetholone tombontsoa izay mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra amin'ny biriky maro, atleta ary mpamono olona. Ireo tombontsoa ireo dia:
(1) Vitsy ny vokatra
Anadrol dia fantatra amin'ny hoe tena mahery vaika sy haingana dia haingana. Mpisera maro no mitatitra fa nahazo ny 10-30 lbs tao anatin'ny herinandro dimy ka hatramin'ny dimy herinandro nisakafoany. Ny dikan'izany dia hoe afaka miala amin'ny hoditra na ny salanisa ianao amin'ny lehibe indrindra ao anatin'ny fe-potoana 2.
(2) Mampiroborobo ny tombom-barotra lehibe izany
Rehefa mampiasa Anadrol ianao, dia mety hahatsapa ny tombony be loatra ao anatin'ny fotoana fohy. Ao anatinà tsingerim-bolana Oxymetholone maharitra maharitra herinandro ka hatramin'ny enina herinandro, afaka mahazo na aiza na aiza amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 pounds.
Ny tazomoka nahazo ny toetran'io steroid anabolic anabolika io dia ekena ao amin'ny fraternity ara-pitsaboana, izany no mahatonga ny zava-mahadomelina amin'ny ankapobeny ho an'ny fitsaboana ny atrophy hozatra, ary koa ho an'ny fitsaboana ny dialyse peritoneal maharitra. Rehefa ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo toe-javatra ireo, ny steroid dia manampy ny marary mahazo tsiranoka marefo.
(3) Mampitombo hery izany
Raha toa ianao ka mandray tsara ny dosimy voamarina Oxymetholone, dia azonao antoka fa hahazo hery goavana ao anatin'ny fotoana fohy. Milaza ny mpampiasa sasany fa nitombo hatramin'ny 40lbs ny fiakaram-pahefana tamin'ny latsaky ny telopolo andro. Misy fianarana maromaro izay nanadihady ny vokatry ny Anadrol amin'ny tanjaka ary nahita ny steroid mba hahomby amin'ny fanamafisana hery. Ny ankamaroan'ny powerlifters dia miantehitra amin'ny steroid mba hanatsarana ny tanjany rehefa akaiky ny fifaninanana.
(4) Mampitombo ny fiaretana izany
Raha matetika ianao no mahatsiaro ho reraka rehefa avy nianatra mandritra ny minitra vitsivitsy, dia ny fitsaboana ity steroid ity no ilainao mba hanatsarana ny asanao. Noho ny fiantraikan'ny Anadrol amin'ny famokarana andian-jiro mena, ny fitsaboana ity steroid ity dia afaka manampy anao hanatsara ny fiaretanao. Midika izany fa afaka manatontosa fanatanjahan-tena mahery vaika kokoa ianao mandritra ny fotoana fohy raha tsy miala.
(5) Manamora ny fahaverezan'ny fatotra izany
Miaraka amin'ny fahombiazan'ny fahombiazana, ny tanjaka ary ny fiaretana maharitra ao amin'ny toeram-pisakafoanana dia lasa mora toy ny 123. Noho izany, ny fanalana an'i Anadrol dia hanampy anao handratra ny tavy tsy ilainao ary hamela anao hanangana hozatra.
(6) Manampy anao haingana izy io
Ny iray amin'ireo fitarainana iraisana fa maro amin'ireo atleta sy mpanao bouddha dia ny hoe ny vatany matetika dia mila mandany andro vitsivitsy miverina aorian'ny fampiofanana mafy. Mampalahelo fa tsy manam-potoana handaniana fitsangatsanganana sy fanasitranana ny mpanao bodybuilder raha toa ka manana tanjona lehibe izy ireo.
Raha toa ianao ka mahatsapa fa mandany fotoana hiandrasana ny vatanao mba hanasitranana indray ianao dia afaka mandresy indray ny fanatanjahan-tena indray, dia ho gaga ianao hoe haingana dia ho afaka hiverina ianao rehefa ampidirinao Anadrol amin'ny fomba fanatanjahanao. Anadrol dia manana fahaizana mahavariana mba hampitony ny fifandraisanao sy ny hozatra, ka hanampy anao ho sitrana sy ho sitrana haingana.
(7) Manampy amin'ny fisorohana ny ratram-po
Manome fiarovana amin'ny mpampiasa izy io amin'ny endriky ny fanangonana ny tongotra mba hanamora ny fitomboan'ny elasticity. Izany no mahatonga an'io anabolika anteriora steroids io ho toy ny fiarovana amin'ny hozatry ny tsiranoka ary manakana ny totozinao sy ny biceps tsy hipoaka mandritra ny fanairana mafy. Noho izany, ny Anadrol dia tsy mampihena ny loza ateraky ny lozam-pifamoivoizana rehefa manainga vato mavesatra, fa mampihena ny fanaintainan'ny fiaraha-mientana izay mahazatra mandritra ny fampihorohoroana.
(8) Mamefika ny haavon'ny SHBG izany
Ny Testosterone dia iray amin'ireo trano fanorenana manan-danja izay manampy amin'ny fiarovana sy hery lehibe. Tahaka ny anarana manolo-kevitra azy, ny hormone mifamatotra globulin dia globulin izay tia mifamatotra amin'ny testosterone. Raha vao mijanona amin'ny testosterone izy io, dia manakana ny hormonina hanao firaisana amin'ny fomba mahomby amin'ny asany. Ny fakana ny Anadrol dia mahasoa amin'ny heviny fa mampihena ny asan'ny SHBG ao amin'ny vatana izany, ka mahatonga ny testosterone hampitombo ny libido ary hampitombo ny isan'ny muscle.
(9) Azo alamina izany
Ny Anadrol dia mety ho voapoizina miaraka amin'ny steroide anabolic hafa. Bebe fombafomba maro dia manampy ity steroid ity ho an'ny vondron'olona goavana noho ny fahafahany manatsara ny vokatra. Na dia mety hiteraka korontana aza ny singam-bolo iray, dia mety haka zavatra na dia avo kokoa aza ny Anadrol. Ny stacks Anadrol dia mahomby indrindra ho an'ireo mpampiasa amin'ny fahazoana angovo sy hery.
Anadrol miaraka amin'i Stack Winstrol no iray amin'ireo safidy tsara indrindra satria manome valiny maharesy sy mahomby amin'ny tanjaka tsy mampino. Ny Anadrol amin'ny testosterone Enanthate stack dia heverina fa ny fiarovana mahery indrindra izay mampitombo ny halavan'ny testosterone ary koa manakana ny fiantraikan'ny depression sy ny libido. Trenbolone sy Anavar dia steroids hafa anabolika izay azo arahina amin'ny Anadrol.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fahombiazan'ny fametahana dia miankina amin'ny karazam-pako ampiasaina. Ny havesatry ny vokatry ny voan'ny Oxymetholone koa dia mety hampihena na hampitombo ny fatran'ny steroid izay manapa-kevitra ny hikorontana amin'ny Anadrol.
8.Anadrol (Oxymetholone) famerenana
Raha miresaka amin'ireo mpampiasa Anadrol ianao, dia ho hitanao avy hatrany fa tena malaza io steroid anabolic io. Toa misy fiantraikany tsara eo amin'ny maro amin'ireo mampiasa izany. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia toa faly noho ny vokatra ary faly miresaka momba ny fomba haingana ity steroid anabolika ity manampy azy ireo hahatratra ny tanjony.
Majority of the Oxymetholone fanamarinana dia maneho fa ny Anadrol dia tena manao izay namboarina azy. Taorian'ny herinandro 4 amin'ny famadihana Anadrol, matetika ny ankamaroan'ny mpiserasera no mitatitra fa nanampy betsaka momba ny masomboly 12 avy amin'ny masin'ny leo ny vatany. Maro koa ny mpampiasa milaza fa lasa matanjaka kokoa noho ny teo aloha izy ireo. Ny ankamaroan'ny mpampiasa ihany koa dia afaka mampitombo ny lanjan'ireo fiara lehibe (milina fanontam-pirinty, famonoan-tena, ary fihodinana) ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo isan-jato ao anatin'ny iray volana monja.
Misy ihany koa ny ampahany amin'ireo mpampiasa izay mahita an'i Anadrol ho malemy raha oharina amin'ny Dianabol, nefa manome tombony mitovy amin'ny tanjaka sy ny mass. Milaza ny mpampiasa fa nanomboka tamin'ny andro fahatelo, ny manodidina azy dia nahatsikaritra ny hozatra sy sarotra kokoa. Tsy azo lavina koa ny lalan-kely.
Ho an'ireo mpampiasa izay nanampy an'i Anadrol ho any amin'ny faribolan'izy ireo, dia miteny izy ireo fa tena nahafaty ny fitsiriritany ny steroid. Ny hatsaran-tarehin'ilay fitambarana dia ny fanesorana ny fanirianao nefa tsy ho lasa marefo ianao.
Raha maro ny mpampiasa nitatitra fa nahazo valiny goavana tamin'ny Anadrol, dia misy ihany koa ireo izay nitatitra ny vokany sasany, izay mahazatra amin'ny steroïde. Ny voka-bary antsoina hoe Oxymetholone dia ny:
Ny fihenan'ny taovam-pananahana
9.Anadrol (Oxymetholone) mivarotra
Anadrol dia steroid anabolic-androgenic izay ampiasaina manerana izao tontolo izao amin'ny mpanao biriky izay te-hanangona hozatra sy masaka mandritra ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Na izany aza, matetika dia sarotra ny mahazo aina amin'ny alàlan'ny fameperana ara-dalàna. Vaovao tsara dia hoe misy mpamatsy azo itokisana any Anadrol, raha fantatrao ny toerana hijerena azy.
Ny havana, namana, na mpiara-miasa ao amin'ny toeram-piasan'ny mpitsabo mahay ao amin'ny taovam-pambolena dia mety mahalala ny fomba nampiasain'i Anadrol. Azonao atao ny mahazo fampatsiahivana mpampiasa lehibe ary mahazo tolo-kevitra momba ny toerana ahafahana mividy Anadrol.
Raha tsy te-handeha amin'ny fametrahana fanontaniana ianao, dia misy lalana mora kokoa - mividiana Anadrol amin'ny aterineto. Saika ny zavatra rehetra nividy an-tserasera amin'izao fotoana izao ary ny steroids anabolika dia tsy ny fiatoana. Afaka mividy mora an-tserasera mivantana an-tserasera ny Anadrol ianao amin'ny alàlan'ny fampiononana ao an-tranonao. Izany dia hamonjy anao amin'ny fotoana sy ny olana, satria azonao atao ny mandidy ny vola tianao ary efa navoaka teo an-tokotaninao tao anatin'ny andro vitsivitsy.
Raha hitanao izany Oxymetholone for sale Ao amin'ny tranonkala maro samihafa, zava-dehibe ny anao Buy vardenafil oxymetholone ny tranokalam-pitokisana. Buyass.com dia iray amin'ireo toerana azo itokisana sy azo itokisana izay mivarotra marina Oxymetholone amin'ny vidiny tsara.
Ny tabilao price50 x 50 mg amin'ny Anadrol dia tokony ho eo anelanelan'ny $ 60 sy $ 100 any Etazonia ary eo amin'ny £ 40 sy £ 60 any Royaume-Uni. Mitandrema tsara amin'ireo tranonkala mivarotra Anadrol amin'ny vidiny iray izay miovaova be amin'ireo faritra ireo.
Rehefa avy nividy Anadrol ianao ary nahazoana tombony lehibe, dia azo inoana fa tsy hijanona any ianao. Tahaka ny ankamaroan'ny mpampiasa, te-hanandrana ny steroids hafa ianao. Raha afaka mahita mpamatsy iray izay mivarotra karazam-panafody samihafa ianao dia hamonjy fotoana ianao. Ao amin'ny Buyass.com, dia hahita karazana steroïde be dia be ianao, anisan'izany ny famonoana sy famokarana vokatra izay afaka manampy anao amin'ny alalan'ny fitsangatsanganan-tsainao manontolo.
Misy antony tsara tokony hampiasana Anadrol. Na ny tanjonao dia ny hanatsara ny tanjaka kely anananao, na te ho hitanao haingana haingana, dia afaka manampy anao ity steroids androgenic anabolic ity. Alaivo Anadrol ary aza adino ny mametraka tanjona vaovao ho anao satria ireo efa nomaninao dia azo antoka fa ho avy tsy ho ela.
1. Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984). "Ny fifandraisana amam-bika mifandraika amin'ny steroide anabolic-androgenic: Endocrinology. 114 (6): 2100-6.
2. Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd (2001). "Famerenana ny oxymetholone: Clin Ther. 23 (6): 789-801, adihevitra 771
3. Zderic, John A .; Carpio, Humberto; Ringold, HJ (Janoary 1959). Journal of American Society Society. 81 (2): 432-436.
4. Charles D. Kochakian (6 Desambra 2012). Anabolic-Androgenic Steroids. Springer Science & Business Media. pp. 632.